IWCA Affiliates - Yepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Association
IWCA Affiliates mapoka akaumba hukama hwepamutemo neIWCA; mazhinji ari enharaunda ekunyora epakati masangano anoshandira dzimwe nzvimbo dzenzvimbo. Mapoka anofarira kuve mubatanidzwa weIWCA anogona kuona maitiro pazasi obvunza Mutungamiriri weIWCA.
Parizvino IWCA Inobatana
Middle East / North Africa Kunyorera Nzvimbo Alliance
Canadian Kunyorera Nzvimbo Association / mubatanidzwa Canadienne des centers de rection
European Kunyora Center Sangano
La Red Latino Americana de Centros y Zvirongwa zveChirongwa
Colorado uye Wyoming Kunyora Vadzidzisi Vemusangano
Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva
GSOLE: Global Sosaiti yeVadzidzi Vokuverenga Nekuverenga Pamhepo
SSWCA: Zvikoro zveSekondari Kunyora Center Sangano
Kuve IWCA Yakabatana (kubva iyo Mitemo yeIWCA)
Basa rezvekubatana nemasangano ekunyora nzvimbo nderekupa vanyoreri vemunharaunda, kunyanya varairidzi, mikana yekusangana nekutsinhana mazano, kupa mapepa, uye kutora chikamu mumisangano yehunyanzvi mumatunhu avo kuitira kuti mari yekufambisa isarambidze.
Kuzadzisa zvinangwa izvi nemazvo, vanobatana vanofanirwa, pazvishoma, kumisikidza zvinotevera mukati megore rekutanga rekubatana kwavo IWCA:
Ita misangano yenguva dzose.
Buritsa kushevedza kurudziro yemusangano uye zivisa mazuva emusangano mune zvinyorwa zveIWCA.
Sarudza vakuru, kusanganisira mumiriri kubhodhi reIWCA. Uyu mupurisa achange ave anoshanda pachirongwa chebhodhi uye zvine mutsindo achaenda kumisangano yebhodhi sezvinobvira.
Nyora bumbiro remitemo ravanoisa kuIWCA.
Ipa IWCA nemasangano esangano rakabatana paunobvunzwa, kusanganisira mazita enhengo, ruzivo rwevamiriri vebhodhi, mazuva emisangano, maspika anoratidza kana zvikamu, zvimwe zviitiko.
Chengetedza anoshanda enhengo runyorwa.
Kutaurirana nenhengo kuburikidza neanoshanda ekuparadzira rondedzero, webhusaiti, listserv, kana tsamba yemashoko (kana musanganiswa weiyi nzira, kushanduka sekubvumidzwa kwetekinoroji).
Gadzira chirongwa chekubvunza-kubvunza, kuraira, kuita netiweki, kana kubatanidza izvo zvinokoka vatungamiriri nyowani vekunyora nzvimbo uye nyanzvi munharaunda uye zvinovabatsira kuwana mhinduro dzemibvunzo kubasa kwavo.
Nekudaro, vanobatana vanogashira kurudziro uye rubatsiro kubva kuIWCA, kusanganisira mubhadharo wepagore kubhadhara mari dzemisangano hurukuro masipika (parizvino madhora mazana maviri nemakumi mashanu) neruzivo rwekuonana nenhengo dzinogona kugara mudunhu iro uye ndeveIRA.
Kana mubatanidzwa usingakwanise kuzadzisa izvo zvakatarwa zvakadomwa pamusoro, mutungamiri weIWCA achaongorora mamiriro ezvinhu opa zano kubhodhi. Bhodhi rinogona kutsigira rakabatana sangano nezvikamu zviviri kubva muzvitatu vhoti.